Ciidamada Puntland oo howlgal ka wada Boosaaso – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari, ayaa sheegaya in ciidamada Puntland saaka halkaasi ay ka wadaan howlgalo ammaanka ay ku xaqiijinayaan.
Howlgalkaan ayaa wuxuu ka dambeeyay, kadib markii shalay casir liiqii kooxo hubaysan ay ku toogteen Magaalada Boosaaso Agaasimihii Madaxtooyada Puntland Aadan Gaas Huruuse.
Ciidamada Puntland ayaa la sheegayaa howlgalka inay ku soo qab qabteen dad badan, kuwaasi oo iminka ciidamada ay ku wadaan baaritaano kala duwan oo ku aadan shakiga ciidanka ay u soo qabteen.
Wararka waxa ay sheegayaan Xaafadaha Magaalada Boosaaso ay ka kooban tahay inuu ka socdo howlgalka oo ciidamada ay baarayaan dadka iyo gaadiidka.
Dilalka qorsheysan ayaa ku soo batay Magaalada Boosaaso, oo waxaa beegsi uu ku socdaa Saraakiisha Maamulka Puntland.
Xoogaga Shabaab oo sheegtay masuuliyada dilkii shalay ka dhacay Magaalada Boosaaso, ayaa ku sii hanjabay inay sii wadi doonaan beegsiga ay ku hayaan Saraakiisha Maamulka Puntland.
Ammaanka Magaalada Boosaso ayaa caga badan ku taagneyn tan iyo markii ciidamada Puntland weerar ay Daacish kaga saareen Degmada Qandala ee Gobolka Bari.
Madaxda Madasha oo qaadacay Kuraas ay laaleen Guddiga xalinta khilaafaadka